News 18 Nepal || राजस्थानका कप्तान संजु सामसनले धोनी बारे दिए यस्तो बयान
राजस्थानका कप्तान संजु सामसनले धोनी बारे दिए यस्तो बयान
एजेन्सी । राजस्थान रोयल्सले टोलीका कप्तानका रुपमा यो सिजन संजु सैमसनलाई नियुक्त गरेको छ । यसैक्रममा उनको तुलना एमएस धोनीसँग गरिएको छ । यस विषयमा कुरा गर्दा उनी धोनीको तुलना कसैसँग पनि हुन नसक्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो सत्रमा, राजस्थान रोयल्स आठ टिम सहभागी प्रतियोगिताको अन्तिम स्थानमा रहेको थियो । टोलीले अहिलेको सिजनको पहिलो खेल १२ अप्रिलमा मुम्बईमा पंजाब किंग्ससँग भिड्नेछ । पछिल्लो सीजन, अष्ट्रेलियाका स्टीव स्मिथ टोलीका कप्तान थिए । स्मिथलाइ राजस्थानले रिलिज गरेको थियो ।
स्मिथ वर्तमान सिजनमा दिल्ली क्यापिटलको लागि खेल्नेछन् । आफ्नो मताधिकारलाई सम्बोधन गर्दै संजु सैमसनले भने, “कोही पनि धोनी जस्तो हुन सक्दैन । म मेरो आफ्नै नाम बनाउन चाहान्छु । संजु सैमसन आफैमा पर्याप्त छ ।” उनले भने, “सबैलाई धन्यवाद जसले टोलीलाई समर्थन गर्नुभयो । हामी एक राम्रो खेल देखाउन चाहान्छौं र तपाईंको अनुहारमा खुशी पनि देख्न चाहन्छौं ।”
राजस्थानले दक्षिण अफ्रीकाका आलराउन्डर क्रिस मोरिसलाई चालु मौसममा १५.२५ करोडमा किनेको छ । बंगलादेशका तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान र अलराउन्डर शिवम दुबे पनि टोलीमा छन् । टोली लिलामी बारे संजु सैमसनले भने, “लिलामीमा हामीले आवश्यकता अनुसार सबै खेलाडीहरू किनेका छौं । सबै खेलाडीहरू वर्तमान सत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छन् ।”
राजस्थान रोयल्सले टी-२० को शुरुवात सत्र जितेको थियो । सन् २००८ मा टोलीले फाइनलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई हराएर पहिलो उपाधि जितेको थियो । त्यसपछि, टीम फाइनल पुग्न कहिल्यै सकेन । पछिल्लो सीजन, टीम अन्तिम नम्बरमा रह्यो । यो टोलीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन थियो । यस कारणले टोलीले कप्तान समेत परिवर्तन गर्यो । टोली २०१३ मा तेस्रो स्थानमा थियो । २०१६ र २०१७ मा टीम फिक्सिंगको कारण निलम्बित भएको थियो ।
मुम्बईमाथि बेंगलोरको रोमाञ्चक जित, पटेलले लिए ५ विकेट
नेपालका यी क्रिकेटर यूएस कप खेल्न अमेरिका जाँदै
त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको यस्तो छ खेल तालिका
फखर जमानको सर्वोत्कृष्ट शतक, दक्षिण अफ्रिका विजयी
त्रिकोणात्मक टी-२० क्रिकेट सिरिजका लागि २० खेलाडी बोलाइयो, को को परे ?
अक्सर पटेललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, अब के होला आईपीएल ?
कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आईसीसीको यस्तो निर्णय